Rita, Writing for My Sake!: ကိုယ် နှင့် အသံများ
Posted by Rita at 10/15/2011 03:30:00 PM
မာမာအေးရဲ့ မိမာယာ(ဇတ်လမ်း..အဆိုအငို) ကိုနားထောင်ဘူးတယ်။ အသံကညှို့ဓတ်ပါတယ်ပြောရမလား။
မေရှင်နှင့်ထား ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ရီတာညွှန်းထားတဲ့မာမာအေးကိုလဲနားထောင်လိုက်ပါတယ်။ Thanks 
ရွှေမန်းဆီသို့ ဆိုတဲ့သီချင်းကို မူလအဆိုတော် မစိမ်းစိမ်းတို့၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်တို့ သီဆိုထားတာနဲ့ နောက်လူတွေ ဆိုထားတာ ယှဉ်ပြီး နားထောင်ကြည့်ပါ။ ဌာန်တွေ၊ မင်တွေမောင်းတွေကအစ အသံဝဲပုံတွေ၊ စကားလုံးပီသပုံတွေအထိ လုံးဝ မတူဘူး။
ဥပမာ... စန္နကိန္နရီကို မူလ သီဆိုထားတဲ့ မလှရွှေနဲ့ ဒေါ်မာမာအေးတောင် ပီသပုံချင်းက မတူပြန်ဘူး။ မူလသီဆိုထားတဲ့ မလှရွှေဟာ မြန်မာစစ်စစ်က မြန်မာသံကို အကျအန ဆိုထားသလို ခံစားရတယ်။ စကားတလုံးချင်းမှာ အဖိတွေအဖော့တွေ ရှိနေတယ်။ နားထောင်ရတာ အရသာရှိတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ မလှရွှေဟာ မြန်မာလို ပီပီသသဆိုနိုင်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အခုအသက်အရွယ်မှာ မလှရွှေသီချင်းကို နားထောင်ရတာ ပိုအားရမိတယ်။
မလှရွှေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ပြန်တော့ ဒေါ်မာမာအေးက ခေတ်သံပေါက်နေတယ်။ မာမာအေးရဲ့ တခြားပြန်ဆိုတွေဖြစ်တဲ့ “ကသစ်ပန်း”တို့၊ ချစ်အားငယ်ရသူမယ် တို့ကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်။
ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲမှာ ၁၀နှစ်အောက်ကလေးလေးတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဗွီဒီယိုတွေတွေ့ရင် တို့ကိုလဲလက်တို့ပါနော်...
အိအိချွန်က ဆိုင်းလဲတီးတတ်တယ်ဟုတ်..ညီအစ်မ၂ယောက်အတူပြိုင်တာလေ... ပဲခူးကလားမသိဘူး...
ဟုတ်တယ်..ငယ်ငယ်က ဖေ၊ မေတို့အန်တီမာမာအေးဆိုတာ တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတိုင်း နားမလည်ခဲ့တာ..မရီတာကတော့ သဘောပေါက်သွားပြီ...စန်းထွန်းကတော့ ခုထိ ထုံးဝေးဆဲ...:)
စလုံးနဲ့ ဆလိမ်အသံထွက် ကွာတယ်ဆိုတာကို
ကိုယ်တိုင်ဆို ခွဲတတ်တယ် သူများ မေးရင်သာ သူတို့ ခွဲတတ်အောင် မရှင်းပြတတ်ဖြစ်နေတာ..
The best important way is, when you are singingasong, you have to makeatemporary mood.
The best way for singasong is " with mood".
ကိုယ်လည်း အဆိုတော်နဲ့သရုပ်ဆောင် အသံမပီရင် အတော် စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်တယ်။ အဆိုတော် ယုဇနရဲ့ ရှ၊ ချ မပီတာလိုမျိုး၊ တစ်ချို့သရုပ်ဆောင်တွေ တနဲ့သ မကွဲတာမျိုး... ကြားရတာ နားထဲမှာ ဘ၀င်မတွေ့ဘူး။ သီချင်းတွေ နားမထောင်ဖြစ်တာ တော်တော်တောင်ကြာသွားပြီလို့ ခုမှ သတိရသွားတယ်။
မူရင်းအဆိုတော်က ကိုသက်ဦး ဖြစ်ပါတယ်
နှင်းပျောက်တဲ့နွေ ဇာတ်ကားရဲ့ နောက်ခံတေးဖြစ်